﻿﻿ Gobolada dhexe & Galmudug; dagaal aan dani ku jirin, dadna ku dhimanayaan. | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
Gobolada dhexe & Galmudug; dagaal aan dani ku jirin, dadna ku dhimanayaan.
Dagaalka ka taagan Xeraale; colaadda loo qiildeyayo ee qabanqaabadeedu ka socoto inta u dhexeysa Cadaado iyo Dhuusamareeb; dadka dhimanaya, kuwa dhaawacmaya iyo hantida burbureysa waxa mas’uul ka ah madaxda maanta ka jirta deegaanadaas.
Madaxweynaha gobolada Dhexe, Sheekh Maxamed Shaakir; oo la hubo in uu aqoon iyo garasho u leeyahay waxa ka dhalan kara dagaal sababa dhimashada ama dhaawac qofeed, mid hantiyeed, waxa la gudboon in aan la deegsan magaca maamulka gobolka dhexe si loo dilo ama loo burburiyo magaalooyin iyo deegaano hadda dhisan.
madaxweynaha Galmudug Axmed Geelle Xaaf; waxa uu diiday in uu taageero dagaal Galmudug waddo oo lagu qaado Xeraale iyo Dhuusamareeb toona, isagana waxa saaran in uusan iska fadhin ee adeegsado wixii suuragal ah si uu u baajiyo in hoostiisa ay dad ku dhintaan isaga oo ku fadhiya magaca iyo kursiga Galmudug.
labadaas Oday waxa u si shaqsi u saaran lagana yaabo in wax laga weydiiyo mar aan dheereyn dadka ku dhimanaya hoostooda iyaga oo jooga maamulka iyo xilka.
Odayaasha Cadaado waxa ay dhowaan diideen in Cadaado looga duulo Dhuusamareeb, Xeraale; iyo xitaa deegaano kale, kadib markii ay dad ka soo jeeda intooda badan Dhuusamareeb iyo Guriceel eek amid ah maamulka Galmudug qaarkood ay soo jeediyeen in la qaado duullaan ka dhan ah maamulka gobolada dhexe, iyaga oo doonaya in ay adeegsadaan magaca Galmudug, waana taas sababta gacan ka hadal ka dhacay cadaado bartimihii bishan Agusto.
http://ezeta.com.ar/index.php?option=com_content Yaa dagaalka Hoggaaminaya, Yaase taageeraya?
Saaddaq Sheekh Yuusuf; guddoomiyaha Baarlamaanka gobolada dhexe
Saaddaq Sheekh Yuusuf; guddoomiyaha Baarlamaanka gobolada dhexe iyo Sheekh Mursal Craxmaan Axmed; Wasiirka awqaafta iyo Diinta ee Galmudug oo ah qaraabo aad isuguu dhow ayaa kala taageeraya 2; jufo hoosaad oo xurguf hoose u dhexeyo, sidaas awgeed ayaa u dagaalka Xeraale u socdaa.
Sheekh Mursal Sheekh Craxmaan Axmed; Wasiirka awqaafta iyo Diinta ee Galmudug
Inta kale waxa ay la kala safan yihiin labadaas Mas’uul oo halkii ay hannaanka dhaqanka iyo Diinta wax ku xallin lahaayeen ka doortay in ay qaadaan dagaal aan ujeeddo muuqata iyo macno lahayn, marka laga reebo in la yiraahdo qolo hebla ayaa gacanta ku dhigtay meel hebla, taas oo u muuqata mid madaxda maamuladaas u horseedi doonta in kama dambeysta loo aqoonsado ugu yaraan qaswadayaal.
see Waa maxay sababtu?
Labada jilib ee ay ka soo kala jeedaan Saaddaq Sheekh Yuusuf; guddoomiyaha Baarlamaanka gobolada dhexe iyo Sheekh Mursal Craxmaan Axmed; Wasiirka awqaafta iyo Diinta ee Galmudug; ayaa iska dilay nin, kaddibna jufadii uu ka dhashay ninka la dilay ayaan ku qancin habka wadahadalka iyo mag kala qaadashada, odayaal jooga Xeraale ayaa u sheegay Mustaqbal Radio; in gebi ahaanba ay odayaasha leh magtaa ninka la dilay ee collaaddu ay diideen qaadashada diyo.
Kadib markii uu dhacay isfaham la’aantaasi ayaa labada jufo ee dhibku u dhexeeyo waxa ay taageero kala weydiisteen Saaddaq iyo Sheekh Mursal; oo ah wiilashoodii oo kala haysta magaca iyo galaangal maamullada gobolada dhexe iyo Galmudug, taas oo u sahashay in ay jilibyada shaqaaqadu u dhexeysaa ay midiba si gaar ah taageero ugu hesho.
Waxa kabaracay Xeraale; colaaddan awgeed dadkii deeganaka qaarkood; kuwaas oo saameyntii abaarta ka dhalatay la ildarnaa, waxa ay tageen bannaanka Xeraale si ay uga warsugaan bal in dagaalko dhammaado
Isha sawirka; source site Ahmed Wehlie‏
Collaadda Mareergur laga qabanqaabinayo.
Colaaddaas inteeda badan waxa dabada ka riixaya dhallinyaro markoodii hore kamid ahaa maamulkii ASW; kuwaas oo muddo dheer gobolada dhexe kula dagaalamayey xarakada Alshabaab; balse markii uu dhashay maamulka gobolada dhexe kamid noqday garabkii ASW; ee ku biiray Galmudug; waxa ay dhowr mar soo jeediyeen in xoog iyo dagaal lagu qabsado degmooyinka uu maamulo maamulka gobolada dhexe, balse madaxda maamulka Galmudug intooda badan ma aqbalin soo jeedintaas.
Nin lagu magacaabo macalin Juxjux; oo markiisi hore ahaa macalin dugsi qur’aan ayaa kamid ah dadka qabanqaabinaya dagaal iyo duullaan wata magaca Galmudug oo lagu qaado Dhuusamareeb, waxa uu taageero ka helayaa oo keli ah dhowr qof oo ka soo jeedo Dhuusamareeb iyo Guriceel; kuwaas oo damacsan in ay si xoog ah u qabsadaan degmooyinkaas oo ku jira gacanta maamulka Gobolada dhexe.
Mid kamid ah madaxda gobolada dhexe oo aan weydiinay waxa uu kala socdo dagaalkaas ayaa yiri: Alshabaab waa noo “Alshabaab; Xeraale haka yimaado ama Cadaado haka yimaado”
Ma hubno balse waxa na soo gaartay in macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo kamid ah madaxda maamulka gobolada dhexe uu u sheegay dhallinyarada dagaalada ku jira ee ka tirsan maamulkaas in ay soo baxeyso qolo iyaga qilaafeysa sidaas awgeedna ay tahay lagama maarmaan in lala diriro, taaso oo ka dhigan in macalin Maxamuud Sheekh Xasan; oo intiisa badan jooga dibadda dalka ama Muqdisho uu kamid yahay sababaha ay colaadda iyo deganaansho la’aantu uga taagan tahay deegaanadaas.
Dagaal ay dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacay Degmooyinka gobolka Galgaduud ee uu hadda maamulo maamulka gobolada dhexe, sanadihii 2008-2012; waxa uu u dhexeeyey dagaalkaasi ASW iyo Alshabaab;